मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिकुराइको अर्थ
नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि उनकै गृहनगर दमौलीमा गत बुधबार सत्ताका भिजिलान्तेद्वारा दुर्व्यवहार गरियो । उनलाई प्रशासनले पक्राउ गर्‍यो । कन्टिर–बाबूले ठानेको थियो, यस घटनापछि सुतेको काङ्ग्रेसले बल्ल ब्युँझिने बहाना पायो, अब देशभरि आगो बल्नेछ, सत्ताको आयु छोटिनेछ । तर कन्टिर–बाबू गलत रहेछन् ।
कन्टिर–बाबूलाई लाग्छ, पौडेलप्रतिको दुर्व्यवहार सुनियोजित हो । सत्ताधारीको आन्तरिक विवाद मत्थर बनाउन, नेकपाका कार्यकर्ताको ध्यान अन्यत्रै मोड्ने उपाय पनि हो यो घटना । तर कन्टिर–बाबू यो सोचेर किङ्कर्तव्यविमूढ छन् कि काङ्ग्रेस यो घटनाप्रति किन उदासिन छ ? १७ गतेको घटनाको विरोध २९ गते गर्ने रे ! विरोध गर्न १२ दिन किन कुरेको होला ? कन्टिर–बाबूलाई शङ्का छ – कहीँ यो पक्ष र विपक्षका सभापतिबीच कुनै ‘बार्गेनिङ’को ‘सेटिङ’ त होइन ?